Anti-Corruption Trust of Southern Africa Inoti Hayioni Mutemo Mutsva wekuRwisana neHuwori Uchishandiswa
Vanhu vakawanda vari kuramba huwori pasi rose.
Rimwe sangano rinorwisana nehuwori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti mutemo wekurwisana nehuwori wakasainwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, hauna zvikuru zvaunobatsira sezvo kuine mimwe mitemo yakadzikwa kare isiri kuteverwa mukurwisana nehuwori.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, VaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti chiri kudiwa muZimbabwe pari zvino kuremekedzwa kwemitemo iripo inorwisana nehuwori, kwete kudzika mimwe mitemo isina anotevera.
VaMugabe vakasaina neChishanu chapfuura mutemo we Public Finance Management Amendment Act (Chapter 22:19) uyo unopa masimba kumapoka anochengetedza mutemo pamwe nekurwisana nehuwori, kuti asunge pamwe nekukanda mujeri kwemakore anosvika mashanu,vakuru muhurumende vanenge vabatwa vachiita zvehuwori.
Kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere, hurumende yadzika mitemo yakawanda kwazvo inorwisana nehuwori, inosanganisira wePrevention of Corruption Act wakadzikwa muna a983, wePublic Service Act wakadzikwa muna 1995, weAnt-Corruption Commission Bill wakadzikwa muna 2004, pamwe neweBank Use Promotion and Suppression of Money Laundering Act, wakadzikwa zvakare muna 2004.
Asi VaChaumba vanoti mitemo yose iyi iri kungotsikirirwa nekuti vacho vanofanirwa kunge vachiferefetwa nenyaya dzehuwori vanenge vasingadyi voga.
"Vari kuzonzi vabuda nenyaya dzehuwori iwoyu, zvavanenge vawana zvacho izvozvo havadye voga. Vanodya nevari kumusoro, nevari pasi pavo, nevari mumativi kwavo. Saka vanotya kuti vakangobata mumwechete anokwanisa kufura gure kuti ndoita zvakati nana nhingi nanhingi, saka munoona kuti kana pakadaro chete panonetsa," VaChaumba vanodaro.
Mutemo wakasainwa naVaMugabe uyu unouya panguva iyo gurukota rezvedzidzo yepamusoro, Muzvinafundo Jonathan Moyo nevamwe vakuru muhurumende vari kupomerwa mhosva dzekuita zvehuwori nekomisheni inorwisana nehuwori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, asi hapana ati amiswa pamberi pematare edzimhosva.
Hurukuro naVaAlois Munyaradzi Chaumba